Inona no atao hoe humus: toetra, karazany ary tombony | Green Renewable
Inona no atao hoe humus
Portillo Alemanina | 25/08/2021 16:13 | Tontolo_iainana
Matetika rehefa miresaka momba ny fahavokisan'ny tany isika, na ala io, na saham-boankazo, dia miresaka momba ny humus. Na izany aza, maro ny olona tsy mahalala inona ny humus na ny maha zava-dehibe azy amin'ny tany sy ny zavamaniry. Humus dia tsy inona fa ny zezika voajanahary izay miforona voajanahary amin'ny karazan-tany rehetra amin'ny toetrany voalohany. Izy io dia hita amin'ny vola kely dia kely nefa mahavelona tokoa.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny atao hoe humus, inona ny mampiavaka azy ary ny maha-zava-dehibe ny zavamaniry sy ny tany.
1 Inona no atao hoe humus
2 Soa azo avy amin'ny humus ho an'ny tany
3 Humus avy amin'ny tanety
4 Tombony azo amin'ny fanariana kankana
5 Fomba fanaovana casting kankana an-trano
Humus dia zezika biolojika iray izay mitranga voajanahary amin'ny karazan-tany amin'ny toetrany voajanahary. Tena kely ny habetsany ary manankarena otrikaina. Ohatra, any anaty ala, ny atin'ny humus an-tanety dia 5%, raha ny atin'ny humus eny amoron-dranomasina dia 1% fotsiny.
Izy io dia tsy mitovy amin'ny zezika kompost sy zezika organika satria ao anaty dingan-dàlam-pandrosoana mandroso kokoa izy eo ambanin'ny asan'ny holatra sy bakteria: manana loko mainty izy noho ny haben'ny karbônina avo lenta. Rehefa simba ny humus, manome azota, phosphore, potasioma ary manezioma amin'ny tany sy ny zava-maniry. Izy io no dingana famafana lozika indrindra eto an-tany.
Ny iray amin'ireo fomba mora indrindra apetaka amin'ny humus amin'ny tany dia ny kankana, izay azonao angonina avy amin'ny zaridainanao manokana. Ireo sy ny fako mikraoba dia miteraka dingan'ny famotehana organika ary manafaingana ny fananganana humus anana.
Soa azo avy amin'ny humus ho an'ny tany
Andao hojerentsika hoe inona ny tombony azon'ny humus rehefa eto an-tany izy:
Manampy mitazona rano sy manamboatra azy. Mety amin'ny tany maro ny afaka mitazona rano raha te hanana zavamaniry nambolena ianao. Ny tany misy olona iray be dia be dia afaka manampy amin'ny sivana tsara ny ranonorana mba tsy hanangonany ary hiafara amin'ny famafazana. Noho izany, eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny zaridaina dia mahaliana fa ny tany dia manan-karena amin'ny humus.
Matetika izy io dia manome tsy fitoviana amin'ny tany arakaraka ny karazany. Ohatra, amin'ny tany fasika dia manamboatra ny tany. Etsy ankilany, amin'ny tany tanimanga bebe kokoa dia misy vokany fanaparitahana izany.
Noho ny fisian'ity fitambarana ity, zavamaniry maro no mahita fa mora kokoa ny mampiditra otrikaina amin'ny alàlan'ny faka.
Izy io dia afaka mifehy ny sakafo maha-zavamaniry ary mampitombo ny tanimboly mora kokoa.
Mampamokatra ny tany izany ary noho izany dia manankarena zavamaniry izy.
Raha mampiasa zezika mineraly ianao amin'ny zaridaina sy ny fambolena, ny fisian'ny humus amin'ny tany dia manampy amin'ny fametahana ireo zezika ireo.
Humus avy amin'ny tanety
Ny cormorm dia ampahany lehibe amin'ny fizotran'ny fahavokarana amin'ny tany. Vitsy ny olona mahalala ny tombony azo avy amin'ireny satria tsy vitan'ny hoe mitelina ny zavatra voajanahary hita fotsiny, fa manana asa maro hafa koa. Mamerina ny zavatra biolojika amin'ny endrika efa simba tanteraka izy ireo ary manampy amin'ny fanalefahana mineraly sasany ary hamadika azy ireo ho tany voajanahary be otrikaina izay azon'ny zavamaniry alaina. Inona koa, afangaron'izy ireo amina akora hafa miorina amin'ny faritra lalina kokoa amin'ny tany ambanin'ny tany ny zava-maniry sasany. izay manohana ny fandanjana ny tanimanga sy ny rano.
Ny vokatr'ity dingana ity dia tany misy rafitra matevina sy spongy, izay manohana ny fitanana rivotra sy ny rano. Iray amin'ireo toetra manandanja indrindra amin'ny kankana sy ny antony lehibe mahatonga ny fisian'ireo zavatra mahavelona be dia be ao anaty humus dia ny dikany, satria noho izy ireo, ny humus dia misy azota, phosorea, potasioma, manezioma ary kalsioma betsaka kokoa noho ny tany.
Tombony azo amin'ny fanariana kankana
Ny humus an-tanety dia heverina ho iray amin'ireo substrate tsara indrindra voalaza amin'ny fambolena legioma, zavamaniry manitra ary zavamaniry voankazo. Andao hojerentsika hoe inona ny tombony azo azo avy amin'ny fampiasana ny kankana:
Manamora ny fivelaran'ny zavamaniry sy ny fitrandrahana ireo otrikaina ankapobeny toy ny potasioma, manezioma, phosforus, calcium ary ny hafa, noho ny enta-mavesany bitika bitika.
Tena soso-kevitra indrindra ho an'ireo zavamaniry mila famindrana izy io satria misoroka aretina sy misoroka ratra. Izy io koa dia manampy amin'ny fanamorana ny tsy maintsy hongotantsika. Ho an'ireo zavamaniry mila rano kely kokoa dia manampy amin'ny fisorohana ny tsy fahampiana rano.
Ny humus dia manome tanjaka ireo zavamaniry noho izy manampy amin'ny fitomboana ary mahatonga ny zavamaniry afaka mamoa voankazo lehibe kokoa sy maro loko.
Miaro amin'ny pathogens
Manatsara ny fiasa biolojika izay mahasoa ny tany.
Zezika mety amin'ny fambolena biolojika izy io satria novolavolain'ny singa voajanahary tanteraka ary tsy mandoto ny tany. ny
Izy io dia azo ampiasaina amin'ny zana-kazo, amin'ny substrates.
Mandray anjara amin'ny fifehezana ny pH tany.
Tsy mamokatra poizina izany, ny mifanohitra amin'izay no izy.
Fomba fanaovana casting kankana an-trano
Ny fizotry ny famadihana ny zavatra biolojika ho zezika voajanahary dia antsoina hoe compost worm ary mamokatra compost worm, fantatra koa amin'ny hoe compost worm. Ity fomba ity dia tanterahina ao anaty milina fanaovana zezika an-tanety miaraka amina dabilio samy hafa mifatotra eo ambonin'ilay iray hafa miaraka amina lavaka izay ialan'ny kankana rehefa mandevona ireo sakafo rehetra tahirizintsika ao anatiny. Raha liana amin'ny fanaovana zezika tanindrazana ianao any an-trano dia afaka manao ny zezika any tanety ianao amin'ny fotoana rehetra, eto dia ampianarinay anao ny momba ny zezika kankana.
Sasao kaontenera iray ary totory lavaka vitsivitsy ao anaty fonony mba hanana oksizena ampy ny kankana.
Hetezo ho tsipika ilay gazety ary apetaho takelaka misy sosona eo ambonin'ilay kaontenera.. Ity taratasy ity dia hamela ny kaontenera hidina rivotra tsara kokoa.
Tokony hametraka sosona matevina matevina ianao na dia misy hamandoana sisa aza. Ity sosona ity dia tokony hapetraka eo ambonin'ilay gazety izay efa napetraka ao anaty fitoeram-bokatra.
Ametaho ny sakafo voajanahary sisa tavela toy ny voankazo notapahana sy ny sisa tavela amin'ny legioma.
Apetraho ao anaty kaontenera ireo kankana hahafahan'izy ireo manamboatra ny hummus.
Zava-dehibe ny hahazoana antoka fa ny kaontenera dia ampitaina amin'ny toerana izay tsy ahazoana rivotra na fanovana be loatra amin'ny mari-pana.
Zava-dehibe ny famahanana ireo kankana fako biolojika matetika kokoa. Ao anatin'ny 15 andro monja dia azonao atao ny manana ny kompania voalohany vonona hapetraka amin'ny taninao.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny atao hoe humus sy ny mampiavaka azy ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Inona no atao hoe humus